Onye ọzọ dara na GitHub, ugbu a ọ bụ ntụgharị nke youtube-dl | Site na Linux
N'oge na-adịbeghị anya wepụtara ozi ọma na GitHub ekpochila ebe nchekwa na enyo niile nke oru ngo «youtube-dl», nke a na-etolite dị ka iwu ịba uru iji budata vidiyo site na YouTube na saịtị ndị ọzọ. Egbochiri n'okpuru US Digital Millennium Copyright Act (DMCA) Followinggbaso mkpesa sitere na Industrylọ Ọrụ Mmekọ ndekọ nke America (RIAA).
Ihe ndị a na-ekwu na-ebelata ọnụnọ na ebe nchekwa koodu yana ihe atụ nke nbudata ọdịnaya nwere ikike site na YouTube. Karịsịa, na koodu edemede maka mmịpụta vidiyo, enwere ngalaba nwere ihe akaebe nke ọrụ ahụ, bụ nke a na-egosipụta njikọ maka ihe, nke ndị sonyere RIAA, bụ ihe atụ iji nyochaa.
A na-ejikwa ule ndị ahụ iji nyochaa ọrụ nke usoro mgbochi mgbochi ochie ma budata ọdịnaya ezoro ezo (cipher_signature), a na-ekwupụtakwa ihe ndị a na-agafe na nyocha ederede.
Koodu ahụ kwukwara na ekesara ihe a nwalere n'ule ahụ n'okpuru "YouTube Standard License", nke na-egbochi ikiri site na YouTube naanị ma gbochie mmeputakwa na nkesa na-enwetaghị nkwenye nke onye nwebisiinka.
Nwale ahụ n’onwe ya na-enyocha ikike ibudata ihe n’ebughị ụzọ kwekọrịta na nkwekọrịta akọwapụtara na YouTube yana usoro eji egbochi ohere. RIAA kwenyesiri ike na ndị nwe obere vidiyo ahụ na ihe ndekọ ụda dị mma akpọrọ na koodu ahụ (Warner Music Group, Sony Music Group na Universal Music Group) enyeghị ikike maka ndị mmepe youtube-dl ka ha jiri ọdịnaya ha.
Ezigbo Sir ma ọ bụ Nwanyị:
Ana m agwa gị okwu n'aha Recording Industry Association of America, Inc. (RIAA) na ụlọ ọrụ ndị otu ndekọ ya. RIAA bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa nke ụlọ ọrụ ndị otu ha mepụtara, rụpụta, ma ọ bụ kesaa tepụ ụda olu nke ihe ruru pasenti iri asatọ na ise (85) nke ikike niile ziri ezi nke egwu edere na United States. N'okpuru ntaramahụhụ ịgha ụgha, anyị na-ekwenye na enyere RIAA ikike imechitere ụlọ ọrụ ndị otu ya n'ihe metụtara mmebi nke ndekọ ha, ọrụ ọdịyo, na onyonyo, gụnyere ịmanye nwebisiinka na iwu nkịtị na ịntanetị.
Nwebisiinka nwebisiinka. Anyị maara na ọrụ gị na-akwado koodu iyi youtube-dl na netwọkụ gị na ebe ndị a, n'etiti ndị ọzọ ...
Dabere na eziokwu ndị a, RIAA kwubiri na a na-emepụta youtube-dl kpọmkwem dịka ngwá ọrụ iji mebie usoro nke iji ọdịnaya ikike, ịgbanye usoro nchekwa ma hazie nkesa nke obere vidiyo na ndekọ ụda na-anataghị ikike n'aka onye ji nwebisiinka.
Anyị ekwesịghịkwa ichefu igbochi kedu ihe GitHub mere ka repository nke na-emeghe oru ngo "Popcorn Time" mgbe nata mkpesa sitere na Association Motion Picture, Inc. (MPA), nke na-anọchite anya ọdịmma nke nnukwu ụlọ ọrụ telivishọn US ma nwee ikike pụrụ iche igosi ọtụtụ fim na ihe ngosi telivishọn.
Ihe mgbochi a sitere na mkpesa nke imebi iwu nwebisiinka nke Digital Age (DMCA) na United States.
Dị ka ndị dị otú a, anyị ga-ekweta na e nyere ngwa abụọ ahụ iji nweta ọdịnaya nwebiisinka na-enweghị itinye uche, mana anyị ga-ahụkwa n'akụkụ nke ọzọ n'ihi na enwekwara ọdịnaya enwere ọtụtụ nke ọtụtụ mmadụ nwere, dịka nkuzi, ndekọ nke klaasị, akwụkwọ akụkọ, ọdịnaya maka ebumnuche agụmakwụkwọ, na ndị ọzọ.
N'ikpeazụ, na mmelite iwu GitHub ezigara maka mkparịta ụka, gbakwunyere nkebi ahịrị nke na-akọwapụta ike inyocha ọdịnaya nke ndebe, gụnyere ndị nke onwe, ịchọpụta na imebiga ihe ókè iwu ndị na-akwadoghị, dị ka ihe ndị na-emebiga ihe ókè na nke ndị na-eyi ọha egwu, nakwa foto nke ime ihe ike na imetọ ụmụaka. Emeputara iwu a ka emelitere na November 16.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Onye ọzọ dara na GitHub, ugbu a ọ bụ ntụgharị nke youtube-dl
Carlos Fonseca kwuru dijo
Microsoft, "enyi" nke ngwanrọ n'efu.
Zaghachi Carlos Fonseca
ọ bụghị njedebe nke ụwa, ha nọ na gitlab:
Ukwuu! niile n'ihi klas «YoutubeIE» (site na youtube.py wepụ) nke koodu ahụ dị ebube ma dị nsọ, ị na-asọ oyi bastards.
Git 2.29.0 biara na nkwado nnwale maka SHA-256, oganihu na ndi ozo